सर्वदलीय बैठकबाट भाग्ने, सभामुखले एकलौटी गरे भन्ने ? - Everest Dainik - News from Nepal
सर्वदलीय बैठकबाट भाग्ने, सभामुखले एकलौटी गरे भन्ने ?
२०७८, २९ भाद्र मंगलवार
काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयता नेकपा एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेको मुख्य आरोप सभामुखले आफ्नो कुरा सुनेने भन्ने रहेको छ । सभामुखले पार्टीले कार्वाही गरेका १४ जना सांसदलाई तत्काल कार्वाही नगरेको भन्ने मुख्य आरोप एमालेको छ । यही विषयमा उनीहरुले संसद अवरोध गर्दै आएका छन् । संसदमा अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । सभामुखको टाउको फोड्ने प्रयास गरेका छन् । मर्यादापालकलाई टोकेर घाइते बनाएका छन् ।
नेकपा एमालेका प्रवक्ता योगेश भट्टराईले सभामुखले एमाले संसदीय दलसँग छलफल गर्नुपर्ने कुरा पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरे । तर त्यो भनेको अर्को दिन नै सभामुखले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा भने एमाले अनुपस्थित भयो । सभामुख अग्नी सापकोटाले संसदमा देखिएको गतिरोधका बारेमा छलफल गर्न सबै संसदीय दलका नेताहरुलाई छलआमन्त्रित गरेका थिए । तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली भने स्वीच अफ गरेर सम्पर्कविहिन बने । एमालेका अरु नेताहरुसँग सभामुखको सचिवालयले सम्पर्क गर्दा समेत बैठक कोही सहभागी भएनन् ?
छलफलबाट भाग्ने, कुराकानी गर्न नखोज्ने तर एकोहोरो विरोध गर्ने एमालेको यो शैली अहिले चौतर्फी आलोचनामा परेको छ । त्यसो त विगतमा नेकपा विवादमा पनि केपी ओलीले छलफलबाटै भागेको कारण पार्टी विभाजनसम्म पुगेको सबैले स्मरण गरेकै छन् ।
अहिले एमाले त्यही कुरा दोहोर्याएको छ । उसले छलफल गर्न चाहँदैन, संवाद गर्न चाहँदैन । समस्यालाई बल्झ्याएर अस्थिरता निम्त्याउने मात्रै उसको दाउ छ । एमाले सांसदहरु रचनात्मक छलफल चाहँदनन, उनीहरुलाई सभामुखको टाउको फोडने र टोक्ने लहड मात्रै छ ।
एमालेजनलाई प्रश्न छः आखिर यही संस्कृतिको विकास गरेर एमालेले देशलाई कहाँ पुर्याउन खोजेको हो ? नेकपा त यही प्रवृत्तिले फुट्यो, संसद जसोतसो ब्यूँतिएको छ । के अब सांसदहरुको टाउको फोडेर मात्रै उनीहरुले खोजेको अभिष्ट पुरा हुने हो ?